Ichiefs ibona amathuba omlando kwiCAF - Ilanga News
Home Ezemidlalo Ichiefs ibona amathuba omlando kwiCAF
Ichiefs ibona amathuba omlando kwiCAF
UParker ufuna ukugubha iminyaka ewu-10 eziMpofaneni ngesicoco seChampions League
UFUNA ukuzifaka emabhu-kwini omla-ndo emqhu-delwaneni we-Caf Champ-ions League uBernard Par-ker ongumgadli weKaizer Chiefs okungacaci ukuthi kuzokwenza-kalani ngaye kule kilabhu.
IChiefs izobhekana neWydad Casablanca yaseMorocco emle-nzeni wokuqala we-semi final yalo mqhudelwano ngoMgqibelo ngo-21h00 kulo leliya lizwe. Lo mdlalo ubhekwe ngabomvu nga-bathandi bebhola njengoba iChi-efs izobe iqala ngqa ukudlala kuma-semi final alo mqhudelwa-no.
UParker uthi kayikho into engamjabulisa njengokudla ubhedu kulo mqhudelwano weCaf kwazise wu-nyaka wakhe ka-10 lona egijima kwiChiefs.
“Ngizizwa ngibusise-kile, isikha-thi siyandiza, kangikholwa ukuthi sengihlanganise iminyaka ewu-10. Ngikholwa wukuthi nginqobe zonke izinkomishi, ngadlalela izwe lami izikhathi ezingaphezulu kweziwu-70. Empeleni ngibe nekusasa eliqhakazile ebholeni.
“Ngizizwa ngibusisekile nje-ngoba ngiyingxenye yeqembu le-Kaizer Chiefs elizodlala kwisemi final yeCaf Champions League. Le nto isho lukhulu kimina futhi yilona thuba leli lokuzibeka emabhukwini omlando. Kunga-ngijabulisa uma singase sidle ubhedu kuwunyaka wami ka-10 ngikuyona.
“Konke kulele kimina ukuthi ngiyihole ngobuqotho le kilabhu njengoba bengihlale ngenza. Kufanele ngi-tshale umoya wokuzethe-mba kubadlali ukuthi kukhona esingakwenza. Ngalaba badlali esinabo ngikholwa wukuthi sizo-mangaza abaningi, into emqoka nje wukuhlala siqaphele,” kusho uParker.
Uthi kuzofanele baye kulo mdlalo ngezinhliziyo zabo ziphe-lele ne-miqo-ndo ne-mizi-mba ihluzekile. Uthi ka-kuba-khathazi nakanca-ne ukuthi abanye ozakwabo bavalile, abanye ba-semaholidini ngoba lo mqhudelwa-no umqoka kubona.
Uthi imimoya iphezulu ekhe-mpini, wonke umu-ntu uwulangazelele lo mdlalo.
Uthi izinguquko za-kamuva ezenzeke kule ki-labhu zilethe impilo nje-ngoba iqede isizini iphekwa ngu-Arthur Zwane noDillon She-ppard emuva koku-khonjwa indlela kukaGavin Hunt, indawo yakhe ya-valwa ngoStuart Baxter. Nokho uBaxter ngeke abe yingxenye yalo mdlalo njengoba esalinde amaphe-pha amgunyaza ukusebenza kuleli.
“Izinguquko ezenzekile zile-the impilo esikwatini, hhayi enkundleni nje kuphela nasezi-ndlini zokushintshela. Abadlali bajabulile, ngokujabula ngiqo-nde ukuthi uma kunezinguquko wonke umuntu usuke efuna ukuzibonakalisa kumphathi omusha.
Labo abangalitholanga ithuba lokudlala yilona manje.
“Umqeqeshi u-Arthur noDill-on babuyise inhlansi yethemba kubadlali. Emuva kwalokho imiphumela ibe isiqhamuka. Ukufi-ka kukaBaxter nakho kuletha intokozo ekilabhini. Sizimisele ngokusebenza kanzima ukubuyisa isithunzi sale kilabhu. Nathi-ke njengabadlali kumqoka ukuthi njengoba siya kulo mdlalo si-sheshe sibambe lokhu esikuni-kwa ngabaqeqeshi.
“Kufanele siye kulo mdlalo si-yozithokozisa, sikhululeke. IWy-dad ikhombise ukungasihloniphi sibhekene nayo (kowamaqoqo) siyogeza igama nesithunzi se-thu,” kusho uParker.
•Komunye umdlalo we-semi final yeCaf Champions League, i-ES Tunis yaseTunisia izoshuka-na ne-Al Ahly yase-Egypt ngoMgqibelo ngo-18h00 eTunisia. Imilenze yesibili izo-kuba ngomhla ka-26 kwephezulu.
Previous articleWINA! Easter Data & Shopping Competition
Next articleKUSHIYE IMIBUZO UKUBULAWA KWEPHOYISA LIDLALA I-SNOOKER